István Sándorfi sy ny hosodoko menaka manokana | Famoronana an-tserasera
Misy ny mpanakanto manana kalitao teknika lehibe sy tanana manararaotra ny fahasarotan'ny teknikan'ny solika afaka misolo tena ny hevitra manaitra sasany. Ao anatin'ireny mpanao hosodoko ireny dia misy ny sasany izay tsy anisan'ireo malaza indrindra, saingy tsy midika izany fa tsy tokony hojerentsika izy ireo, toy ny nitranga tamin'i István Sándorfi.
Mpanao hosodoko miaraka a fifehezana menaka tsara ary amin'ny isam-pandehanana tsirairay dia afaka mahita tsipika azo antoka sy hentitra ianao hanehoana ireo asa mitombina amin'ny zava-misy toa ilay manahirana antsika atoandro amin'ny orana sy rahona fotsy izay manimba ny fahatsapantsika. Sandorfi dia milalao manala ny ampahany sasany amin'ny vatan'olombelona toa ny miseho amin'ny sarin-doha misy kalitao ambony.
Asa tsara tarehy izay manao an'io Mpanao hosodoko hongroà izay niaina ny ankamaroan'ny fiainany tany Frantsa ary nandao anay tamin'ny 2007. Mpanoratra miaraka amin'ny zavatra sy fiovana asehony araka ny naseho ny tantaram-piainany izay nanehoany ny nanehoany ny tenany nandritra ny taona maro fa misy ny hafa manelingelina azy eo am-panaovana ny asany. . Izahay dia tsy hiteny na inona na inona momba ny maha-izy azy ireo mpanakanto.
Nanomboka tamin'ny 1988 dia nanomboka sary vehivavy ihany no mandoko nofonosina lambam-pandriana ary indraindray napetrany teo akaikin'ny zavatra tsy fahita firy. Mpanakanto iray izay nihevitra ny tenany ho nahay nianatra, na dia nandalo institiota malaza roa aza izy. Ny mpitsikera ny zavakanto dia nametraka an'i Sándorfi ho mpanakanto hyperrealista, izay nitranga fa tsy nihevitra ny tenany ho iray akory izy, satria, tamin'ny sanganasany, na dia be fandinihina tokoa aza izy ireo dia nisy hatrany ny tsy fahombiazana niniana natao, araka ny hitantsika amin'ny sangan'asa.
Un mpanao hosodoko lehibe mitondra ireto andalana ireto izahay hahitantsika ny sasany amin'ireo sangan'asany tena tsara tamin'ny hyperrealism ary niaraka tamin'io fitsaboana tsara tarehy io, indrindra ny iray tamin'ireo zanany vavy.
Ny menaky ny iray hafa nampianarin-tena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny hosodoko solika an'ny István Sándorfi